မရေမရာ (ဂျပန်ရုပ်ရှင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် တိုရှိယ အုအဲနို ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်
မရေမရာ (曖昧, Aimai?) aka Waisetsu Netto Shūdan Ikasete!! (猥褻ネット集団　いかせて!!?) နှင့် Group Suicide: The Last Supper (集団自殺　最後の晩餐, Shūdan Jissatsu: Saigo no Bansan?)သည် တိုရှိယ အုအဲနို ဒါရိုက်တာတိုရှိယ အုအဲနို ရိုက်ကူးသော ၂၀၀၃ ဂျပန် ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ပန်းရောင်ဂရင်းပရစ်ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။
Ambiguous (၂၀၀၃) ဒီဗီဒီကာဗာ
ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၀၃
မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင် အဆင်မပြေ ဒုက္ခများစွာနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော မတူကွဲပြားသည့် လူစုသည် အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ဆုံပြီး၊ အတူတကွ သတ်သေကြရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကြီးထွားလာသော လူမှုဆက်ဆံရေးလောကမှ ထီးတည်း ကျန်နေရသော သူတို့သည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန် နီးကပ်လာသောအခါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ဆက်နွယ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ပညာရှင် ဂျက်စပါ ရှာ့ပ်က မှတ်ချက်ပေးသည်မှာ၊ ခေတ်ပြိုင် ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်အတွက် မတူသော ပရိသတ် နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု၍ ဖြစ်သည်၊ တမျိုးမှာ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် လိင်ကိစ္စကို ကြည့်ရှုရသည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ အစဉ်အလာအတိုင်း ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ သွားလေ့ရှိသူ ဖြစ်ကာ၊ တမျိုးမှာ P*G မဂ္ဂဇင်းနှင့် ၎င်းဝက်ဆိုက်ကဲ့သို့သော ထုတ်ဝေမှုများက ညွှန်းဆိုသော ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ရုံများကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။ ကိုကုအေး၏ ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်များအတိုင်းပင် မရေမရာဇာတ်ကားသည် အဆိုးမြင်ထားသော အကြောင်းအရာကြောင့် ရိုးရာ အပြာစာအုပ်ပရိသတ်များ၏ အာရုံကို မဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ချေ။ ရုပ်ရှင်ထဲရှိ လိင်ဇာတ်ဝင်ခန်းများသည် အဖော်အချွတ် ပန်းရောင်အမျိုးအစားဘက်သို့သာ ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိသွားသော်လည်း ထိုနှစ်အတွင်း ဂျပန်လူမျိုး၏ လွတ်လပ်မှုကဏ္ဍအတွင်းတွင် အထိရောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်သည်ဟု ရှာ့ပ်က ရေးသည်။
မဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုသူများက ရုပ်ရှင်ကို အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် မဲပေးကြပြီး၊ ဇာတ်ညွှန်းအတွက် ဟိဒဲခဇု တကဟာရကို ဒုတိယဆု ပေးကြသည်။
အခြားပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ကားများကဲ့သို့ပင်၊ မရေမရာသည်လည်း ခေါင်းစဉ် တခုမက ပေးခြင်း ခံရသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် မူလပြသစဉ်က ခေါင်းစဉ်မှာ ညစ်ညမ်းအင်တာနက်အုပ်စု၊ လာပြီလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ပန်းရောင်ဂရင်းပရစ်က မရေမရာ ခေါင်းစဉ် ပေးလိုက်ပြီး၊ ယင်းခေါင်းစဉ်နှင့်ပင် ဂျပန်နှင့် နိုင်ငံတကာသို့ ဒီဗီဒီ အခွေ ဖြန့်လေသည်။ ထိုရုပ်ရှင်ကိုပင် သတ်သေအုပ်စု၊ နောက်ဆုံးညစာ အမည်ဖြင့် ဂျပန်တွင် ဖြန့်သေးသည်။ ၂၀၀၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ တွင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး လောကတွင် မရေမရာ အမည်ဖြင့် ဖြန့်သည်။
မရေမရာ at the Internet Movie Database
↑ Infobox data from 猥褻ネット集団　いかせて!! (in Japanese)။ P.G. Web Site။ 2009-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။; 猥褻ネット集団　いかせて！！ (in Japanese)။ Japanese Movie Database။ 2009-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ and 集団自殺　最後の晩餐(2003) (in Japanese)။ allcinema.net။ 2009-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မရေမရာ_(ဂျပန်ရုပ်ရှင်)&oldid=449813" မှ ရယူရန်
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၉:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။